mardi, 13 août 2019 21:15
Antenimierandoholona: Nomen’ny HCC fahefana hanendry Senatera ny filoha Andry Rajoelina
Hita fototra ny fahabangan-toerana eo anivon’ny Antenimierandolona taorian’ny fametraham-pialan’ny Senatera Ravoninahitriniarivo Mbade Jeanine Gabrielle.
Senatera notendren’ny filohan’ny Repoblika ity farany, nirotsaka hofidiana solombavambahoaka tao Maevatanana tamin’ny lisitra tsy miankina izy, tamin’ny fifidianana natao ny 27 mey 2019, ary voafidy ka isan’ireo mandrafitra ny Antenimieram-pirenena mandritra ny dimy taona.
Araka ny didy 49-HCC/AR navoakan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny 13 aogositra 2019, ao amin’ny andininy faharoa, dia omem-pahefana ny filohan’ny Repoblika hanendry Senatera vaovao ho solon’ity Senatera voafidy ho depiote ity, hamenoana ny banga.
mardi, 13 août 2019 21:08
Tato anatin’ny roa andro izao dia mihenahena any ambon’ny 4 100 Ariary ny Euro iray, ary any ambonin’ny 3 665 Ariary ny Dôlara amerikanina iray. Tamin’ity androany ity izao dia 4 100,62 Ariary ny Euro iray, ary 3 669,85 Ariary ny Dôlara iray, amin’ny sandam-pifanakalozana vola.
mardi, 13 août 2019 20:19
LA CITY Ivandry: Toerana hoan'ny haikanto sy ny kolontsaina malagasy
Notokanana androany teny amin'ny LA CITY Ivandry ny toerana hoan'ny haikanto sy ny kolontsaina malagasy, izay mitondra ny anarana hoe CITY AR'T. Tonga nanatontosa izany ny avy amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina tamin'ny alalan'ny ramatoa minisitra Lalatiana RAKOTONDRAZAFY ANDRIATONGARIVO sy Andriamatoa Danil Ismael, filoha mpanorina ny vondron'orinasa SMTP.
mardi, 13 août 2019 20:16
Fahasalamana: Ady amin'ny aretina HEMOPHILES na ny fijininihin'ny rà lava
Nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana, izay natao tao amin'ny HJRA Anosy, mahakasika ny aretina HEMOPHILES na ny fijininihin'ny rà lava.
Nanazava mahakasika izany moa ireo tompon'andraikitra ary
nilaza izy ireo fa azo tsaboina sy sorohina tsara io fijinihin'ny rà io.
Misy ny tetik'asa manamora ny fitsaboana izany eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana.
mardi, 13 août 2019 14:00
mardi, 13 août 2019 13:58
« Papamobile »: Karenjy « Mazana I » no nitondrana an’i Papa Joany Paoly II
Hitsidika an’i Madagasikara ny Papa François ny 6 ka hatramin’ny 10 septambra 2019. Efa nampahafantarin’ny mpikarakara, ny fandaharam-potoanany, mandritra ny diany eto. Fanontaniana tsy mbola nahazoam-baliny kosa hatreto ny amin’ny « Papamobile » na ny fiara hitondra an’i Papa François amin’ireo fotoana ireo, indrindra amin’ny fahatongavany manoloana ny mpino maro ho avy eny Soamandrakizay-Androhibe mandritra ny lamesa lehibe hotarihiny ny alahady 8 septambra 2019.
Papa Katolika faharoa hitsidika an’i Madagasikara i Papa François. Telopolo taona lasa izay, ny taona 1989, no nitsidika teto i Papa Joany Paoly II. Fiara Karenjy « Mazana I » no "papamobile" nitondra an’i Papa Joany Paoly II tamin’io.
Mbola voatahiry tsara ao Fianarantsoa io fiara io ary naseho vahoaka nanoloana ny Katedraly Ambozontany tamin'ny aprily 2014, fotoana fanandratana ho Olomasina an'i Papa Joany Paoly II.